Aung Lynn Htut: ပါတီတွင်း စိတ်ဝမ်းကြွဲပားမည်စိုး၍ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးနေရာအတွက် ဦးသိန်းစိန်နှင့် သူရဦးရွှေမန်းတို့ကို မဲစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်ဖျက်ခဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်သိမ်း ဥက္ကဋ္ဌနှင့် သမ္မတလောင်းဖြစ်လာနိုင်
ပါတီတွင်း စိတ်ဝမ်းကြွဲပားမည်စိုး၍ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးနေရာအတွက် ဦးသိန်းစိန်နှင့် သူရဦးရွှေမန်းတို့ကို မဲစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်ဖျက်ခဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်သိမ်း ဥက္ကဋ္ဌနှင့် သမ္မတလောင်းဖြစ်လာနိုင်
ပါတီတွင်း စိတ်ဝမ်းကြွဲပားမည်စိုး၍ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ
ရာထူးနေရာအတွက် ဦးသိန်းစိန်နှင့် သူရဦးရွှေမန်းတို့ကို
ပြန်လည်ရွေးချယ်မည့် အစီအစဉ်ဖျက်ခဲ့ အထွေထွေ
နေပြည်တော်တွင် ဇန်န၀ါရီ ၁၇၊ ၁၈ ရက်များ၌
ကျင်းပခဲ့သော ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး၌
ပါတီဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးနေရာအတွက်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းတို့ကို မဲပေးရွေးချယ်မည့်
အစီအစဉ်အား ပါတီ တွင်း စိတ်ဝမ်း ကြွဲပားမှုများ
ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်သည့်အတက်ွဆိုင်းငံ့ခဲ့ကြောင်း
တပ်မတော် အကြီးအကဲများ၊ အာဏာရပါတီ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့်
အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး က မြန်မာသံတော်ဆင့်
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးကို
နေပြည်တော် ပါတီဌာနချုပ်ရုံး၌ ကျင်းပခဲ့ရာ
မီဒီယာများကို ကန့သ် တ်မှု စနစ်ဖြင့်
၀င်ရောက်စေခဲ့ပြီး အာဏာရပါတီနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အပေါ် ပြင်းပြင်း
ထန်ထန် ဝေဖန် ရေးသား လျက်ရှိသော မြန်မာသံတော်ဆင့်
သတင်းဌာနကိုမူ အစည်းအဝေး မတိုင်မီ
တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် ဖိတ်ကြားခဲ့သော်လည်း
အမှန်တကယ် အစည်းအဝေး ကာလတွင်မူ မြန်မာ
သံတော်ဆင့် နေပြည်တော် သတင်းထောက်ကို
၀င်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ
ပထမနေ့တွင် ထွက်ရှိသော မြန်မာသံတော်ဆင့်
ဂျာနယ်၌ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ-၃
ဦးဌေးဦး၏ အမည်ကို နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများက
စီနီယာ သဘောထား၍ ရေးသား ဖော်ပြနေမှုများ အား
ဝေဖန် ထောက်ပြထားသည့် သတင်းဆောင်းပါး
ပါရှိခဲ့သည်။ အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အပေါ်
ဝေဖန်ရေးသားသည့် မီဒီယာများတွင် မြန်မာသံတော်ဆင့်
မီဒီယာမှ ဝေဖန်ရေးသားချက်များ သည်
အခြားမီဒီယာများထက် ပိုမို ထိရောက်သော
ဝေဖန်ချက်များဖြစ်ကြောင်း၊ အတွင်းသိဖြစ်၍ ဖွယ်ဖွယ်
ရာရာ ဖြစ်နေကြောင်းဖြင့် အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ
ဦးအောင်သောင်းက ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း
မြန်မာသံတော်ဆင့်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ်က ထုတ်ဖော်
မပေးခဲ့သည့် ကျင်းပခဲ့သော ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးနှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌
ရှင်းလင်းဖြေကြား ချက်တွင် နိုင်ငံရေးလောက၌
ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အမှန်တကယ် တာဝန်ရှိသူမှာ
မည်သူမည်ဝါ ဆိုသည်ကို ထည့်သွင်း
ဖြေကြားခဲ့ရာတငွ်““ကျန်ွတော်တို့ရဲ့
ဥကဋ္ဌ္က ဖြစ်တဲ့သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးသိန်းစိန်သည်
သမ္မတဖြစ်ပါသည်။ ပါတီတာဝန် ထမ်းဆောင်လ့
ို မရပါဘူး။ အလဲို ထမ်းဆောင်လို့ မရတ့အဲ ချိန်မှာ
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌထဲက ၀ါအရင့်ဆုံး ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတစ်ယောက်သည်
ပါတီဥက္ကဋ္ဌရဲ့ တာဝန်ကို ပူးတွဲ
ထမ်းဆောင်ရတယ်””ဟု မီဒီယာများကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ထိပ်တန်း
ဗဟိုကော်မတီများအဖြစ် သိရှိကြသော ဗဟိုကော်မတီနှင့်
ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီတို့၌ ဥက္ကဋ္ဌ-ဦးသိန်းစိန်၊
ဦးသိန်းဇော်၊ ဗဟို အတွင်း
ရေးမှူးများမှာ – ဦးခင်အောင်မြင့်၊
ဦးသိန်းဆွေ၊ သူရဦးအောင်ကိုတို့ ပါဝင်ပြီး ပါတီတာဝန်များမှ
အနားယူ လိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် သတင်းထွက်ပေါ်နေသော
ခြဲ့ကသည့် ဦးသောင်း၊ ဦးမောင်ပါ၊ ဦးလနွ်းသီ၊
ဒေါက်တာမြဦးတ့ကို ဗဟိုအကြံပေးများ
အဖြစ် ထည့်သငွ်း ဖွဲ့စည်းထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ပါတီတာဝန် မထမ်းဆောင်စေကာမူ တရားဝင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကြောင်းကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွင်ဒုဥက္ကဋ္ဌများထက်
(သမ္မတလောင်းနေရာ) မစဉ်းစားရသေးကြောင်း ပါတီ
ဗဟိုအတိုင်ပင်ခံ အချို့က မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေး လေ့လာသူများနှင့် မီဒီယာအချို့က
ထကိဲု့သ့အိုာဏာ ရပါတီဥက္ကဋ္ဌနေရာအတက်ွတိတိကျကျ
ဝေဖန်မှုများ၊ ရေးသားမှုများ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထွက်ပေါ်
သမ္မတရုံးက လာရောက် ဖြေကြားချက်မှလည်း
အများပြည်သူ မရှင်းမလင်း ဖြေကြား မှုသာ
ဖြစ်နေ၍ နိုင်ငံရေးလောကတွင် အာဏာရကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ
ဥက္ကဋ္ဌ အစစ်အမှန် ဦးသိန်းစိန်လော၊ သူရဦးရွှေမန်းလော၊
ဝေဖန် သုံးသပ်ချက်တွင် သမ္မတနှင့် နီးစပ်သူများက
ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌတရားဝင်မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်
ပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားကြပြီး ယခုနောက်ဆုံး
ကျင်းပခဲ့သော ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ
အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း များတွင် ပါတီဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
အောင်နိုင်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ပင်
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ၂၀၁၅၌ အနိုင်ရ၍ အာဏာရနိုင်ရေးအတွက်
အာဏာ ၃ ရပ် ကိုင်စွဲထားသူများအား
လက်မလွှတ်တမ်း အသုံးချသွား မည် ဖြစ်ကြောင်း
ဝေဖန်ပြောဆို ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်
မဲဆန္ဒနယ်အားလုံး ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ပါတီတွင်း ဂိုဏ်းကွဲမှုများ
ရှိကြောင်း၊ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဂိုဏ်းနှင့်
ပါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းဂိုဏ်း၊ မည်သည့်
ဘက်မှမလိုက်သော ကြားနေဂိုဏ်းဟူ၍ ဖြစ်ကြောင်း
အာဏာရပါတီ အစိုးရနှင့် ရင်းနှီးသူများက
ဝေဖန် ပြောကြား မှုများ ရှိခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ
စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှု အပေါ် အများပြည်သူ
ပါ် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဝေဖန်ထောက်ပြ
ပြောကြားခဲ့သော ကြံ့ခိုင်ရေး ဗဟိုကော်မတီဝင်သာသနာရေး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သရေစည်သူ ဦးဆန်းဆင့်အား
အစိုးရက ဖမ်းဆီး အရေးယူခ့ရဲာ၌ ဦးဆန်းဆင့်
စီရင်ချက်အတွက် သက်ညှာစွာ စဉ်းစား၍
လွတ်မြောက်နိုင်ရန် လက်ရှိ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီ
ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက
ကြံ့ခိုင်ရေးဥက္ကဋ္ဌ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့
သ၀ဏ်လွှာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့ခြင်း၌ ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်လက်မှတ်
ထိုး တောင်းဆိုခ့ေဲ သ်ာလည်း အစိုးရမှ
ဦးဆန်းဆင့်ကို ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည် ချမှတ်ခ့သဲ ည်။
ထ့အို တက်ွကြောင့် သူရဦးရွှေမန်း ဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်သော
ဦးဆန်းဆင့်ကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဂိုဏ်းမှ
ဖမ်းဆီး ခဲ့သည်ဟူ၍လည်း ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများက
ယင်းသို့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတငွ်း ဂိုဏ်းဂဏများ
ကြွဲပားနေကြောင်း ဝေဖန်သံ ညံနေချိန် တွင်
ပါတီ ထိပ်တန်း ဗဟိုကော်မတီဝင်များဖြစ်သည့်
သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊
၀န်ကြီးဦးစိုးသိန်းက မီဒီယာ အချို့ကို
ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားလာခဲ့ရာ
ဒုဥက္ကဋ္ဌများထက် ပါတီတာဝန် အဆင့်မြင့်သော
ဗဟိုအတိုင်ပင်ခံ ဦးအောင်သောင်းနှင့် ဦးတင်ထွတ်တို့
အပါအ၀င် ပါတီထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် အချို့က
ထိုက့သဲ့ို ဦးစိုးသိန်းမှ ဟက်လိုင်နာဟု ပြောခြင်းနှင့်
ပတ်သက်၍ မြန်မာသံတော်ဆင့်မှ တစ်ဆင့်
ထို့အတွက်ကြောင့် လည်း နိုင်ငံရေးဝေဖန်
လေ့လာသူများတွင် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီတွင်း၌ အမာဂိုဏ်းနှင့်
အပျော့ဂိုဏ်း ထပ်မံကြွဲပား ကြပြန်ကြောင်း
သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်
အနားယူကြသော အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ယခင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ
ကော်မတီဝင် များအားလည်း ပါတီမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း
ဆက်လက် ပေးအပ်ကြောင်းလည်း ပါတီထိပ်တန်းဗဟို
အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦး က
မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောကြား ခဲ့သည်။
လက်ရှိကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး
မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်)
ဆက်စပ်၍ ငွေကြေး ခိုင်မာ တောင့်တင်းကြောင်း အစိုးရနှင့်
နိုင်ငံရေး ဆောင်းပါး များ ရေးသားလျက်ရှိသော
င် အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဒေါက်တာပညာသာမိ
တောင်ကလေး ဆရာတော်ကြီး က
၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမား အချို့ကလည်း ယင်းသုံးသပ်ချက် အတိုင်းပင်
စီနီယာအရ ဗိုလ်မှူးချုပ်(ငြိမ်း) ဦးမောင်မောင်သိမ်းသည်
ဥက္ကဋ္ဌနှင့် သမ္မတလောင်း ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း
အတည်ပြု သုံးသပ် ပြောကြားခဲ့သည်။__
Nyein PyaeJanuary 25, 2015 at 12:17 AMHello, U Aung Lynn Htut !I would like to contact with you. Could you please tell me your email address or something like that?(I'm sorry for I could not reveal my full name here in comment) ReplyDeleteAdd commentLoad more...